Lamaane Shiinays ah oo 200 oo baranbaro la galay garoon diyaaradeed - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka KANKAN NEWS
Image caption "Markii ay furaysay way booday" sida ay sheegeen shaqaalaha diyaaraddu
Arrintan layaabka leh ee lagu arkay lamaanahan da'da ah ayaa dhacday 25 Nofeembar.
"Meesha waxaa ku jiray bac ay ka dhex dhaqdhaqaaqayeen waxyaabo badan oo madmadaw," sida Kankan News ay u sheegay Xu Yuyu oo ilaalada ka mid ahayd.
"Gabadh ka mid ah shaqaalihii ayaa markaas furtay boorsada, baranbaro ayaana ka soo yaacday. In ay ooydana waxyar baa uga dhimanaaa ," ayayna hadalkeeda ku sii dartay.
Ma uusan sii faahfaahin xaaladda xaaskiisu ku sugan tahay, laakiin Yu ayaa sheegtay in masuuliyiinta loo sheegay in ay tahay nooc dawo ah oo waayadii hore la isticmaali jiray. Inta kareen dawo ah lagu qaso baranbarta ayaana jirka la marsadaa."
Lahaanshaha sawirka Image copyrightKANKAN NEWS
Image caption Xu Yuyu ayaa sheegtay in ay lamaanuhu wateen 100 ilaa 200 oo baranbaro
Bishii Agoosto saraakiisha ammaanka ayaa helay nin safrinaya labo gacmood oo binii'aadan ka dib markii ay ka soo dhex muuqdeen mashiinka x-rayg loo yaqaanno ee ammaanka lagu baaro kaas oo lagu arki karo waxa boorsada gudaheeda ku jira.